004 I-Colorado River Rustic Cabin Rental Sleeps 4 - I-Airbnb
004 I-Colorado River Rustic Cabin Rental Sleeps 4
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Arizona Oasis
Igumbi elilodwa lokukhempa ikhabethe elinogesi, i-A/C, ihitha, kanye negrill encane yangaphandle ye-BBQ. Banombhede owodwa ophindwe kabili ngaphakathi kanye nombhede owodwa ongalala kuwo wokulala abane. Amalineni awanikeziwe, ngakho-ke letha izingubo zakho zokulala. Ungahlola okokulala ngezikhathi zomsebenzi ngenkokhelo engu-$40. Amakhabethe atholakala eduze kwe-clubhouse ene-bathroom namashawa. Amakhabethe acishe abe ngamayadi ayi-100 ukusuka emfuleni iColorado. I-RV resort ine-swimming pool kanye nobhavu oshisayo, ulwandle olukhulu kanye nezindawo zotshani.
Ama-Rustic Cabins ethu alungele uhambo lokukhempa oluya emfuleni. Afakwe ugesi, i-A/C, nokushisa ukuze uhlale unethezekile. Amakhabethe awanalo ikhishi noma indawo yokugeza. Qasha i-RV noma i-Tiny Home uma ufuna izinsiza ezengeziwe. Atholakala kalula eduze kweClubhouse enamagumbi okugeza, ishawa, kanye ne-microwave endaweni enkulu yeClubhouse. Wonke amakhabethe anompheme ongaphambili one-swing kanye ne-bbq grill encane yokupheka.
Ukwethulwa komzila wesikebhe emi-5 kuzokungenisa futhi kukukhiphe emfuleni ngokushesha. Izindawo ezi-2 zolwandle zokubeka amashubhu akho, ama-kayak, izikebhe nokunye kwenza kube lula ngawe ukuthi ungene ezweni. Izinsiza ze-Clubhouse njenge-swimming pool (ne-kiddy pool!) ubhavu oshisayo, amashawa nokunye kunezela endleleni yakho yokubaleka.
4.64 out of 5 stars from 59 reviews
4.64 · 59 okushiwo abanye